मौसमी डिप्रेशन - परिभाषा, लक्षण, र उपचार
प्रकाशित 05.05.2021 05.05.2021
शरद theतु वर्षको सबै भन्दा निराश पार्ने समय हो। किन? यस्तो देखिन्छ कि वरिपरिको सबै चीजले उज्यालो र colorsहरू प्राप्त गरिरहेको छ, भुइँमा क्रunchच छाड्दछ, यो यति तातो हुँदैन र तपाईं खुशीसाथ पोडल्समा तपाईंको प्रतिबिम्ब समात्नुहुन्छ। तर सबैजना यस प्रकृतिसँग खुशी छैनन्, र केहि दमन गर्दछन्।
के यो केवल प्राकृतिक अवस्थाले गिरावटमा मुडलाई असर गर्दछ? किन मौसमी उदासीनता सबै भन्दा साधारण मानिन्छ? कुन कारणहरूले यसको उपस्थितिलाई प्रभाव पार्दछ र यसको व्यवहार गर्ने विधिहरू के हुन्? सर्वप्रथम, तपाईंले डिप्रेसन के हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ।
स्पष्टीकरणात्मक शब्दकोशका अनुसार डिप्रेसन एक अवस्था हो जसमा भावनात्मक अवरोधहरू पहिचान गरिन्छ। मुड र ऊर्जाको विफलता, निद्रा समस्याहरू, चिन्ता, उदासीनता, आत्मसम्मानमा गिरावट र अक्सर आत्महत्या विचार सबैले डिप्रेसनको उपस्थितिलाई स can्केत गर्न सक्दछन्।
यद्यपि, केहि केसहरूमा, त्यस्तो राज्यले विभिन्न जीवन घटनाहरूमा अस्थायी प्रतिक्रिया पनि हुन सक्छ। यसको अवधारणामा डिप्रेसन सामान्यतया कम्तिमा दुई हप्ता सम्म रहन्छ र लामो समयसम्म रोक्न सकिन्छ, पहिले नै मानसिक रोगको कोटीमा जान्छ।
सम्भावित विस्तारका मौसमहरू
तथ्या .्कका अनुसार 40०% मानिसहरू मौसमी उदासीनताका लागि अति नै संवेदनशील हुन्छन्, र ती मध्ये आधा बढी महिलाहरू हुन्। त्यस्ता डाटाको एक मुख्य कारण, डाक्टरहरूले संक्रमण समयलाई कल गर्छन्। गिरावटमा, दिन छोटो हुन्छ, र त्यसैले शरीरमा पर्याप्त प्रकाश हुँदैन।
निद्रा हर्मोन (melatonin) र आनन्दको हार्मोन (सेरोटोनिन) को उत्पादन मा एक विफलता छ। शरद depressionतुमा देखा पर्ने अर्को शारीरिक कारण शरीरमा भिटामिनको तीव्र कमी हो, खानामार्फत प्राप्त गरिएको।
ब्लूज को उपस्थिति, शारीरिक र प्राकृतिक कारकहरु को अतिरिक्त, केहि अनुभवहरु बाट प्रभावित हुन सक्छ। आखिर, शरद ationsतु पनि छुट्टिहरु र बिदाको अन्त्यको समय हो, नयाँ वर्ष भन्दा अघि नतिजाको सारांशको समय, वर्दी फेर्ने अवधि, र यस्तै। महिलामा, हर्मोनल कारकहरू र डबल लोड (घर प्लस वर्क) यी सबैमा थपिएका छन्।
महिला र पुरुषहरूमा उदासीनताको सामान्य लक्षणहरू समान छन्। जे होस्, महिलामा यसको अभिव्यक्ति सामान्यतया उदास र उदास स्थितिमा व्यक्त हुन्छ, जबकि उदासीमा रहेका पुरुषहरूको लागि, चिढचिढाहट र क्रोधको अभिव्यक्ति चरित्र हो।
शरद depressionतु डिप्रेसनका सबै लक्षणहरू मध्ये, निम्नलिखित प्राय: जसो भिन्नता पाइन्छ:
ब्लुज, मुडको अभाव;
निराशावाद र उदासी;
पहिले मनपर्ने गतिविधिहरूमा चासोको कमी;
अनिद्रा र तन्द्रा;
आत्मसम्मान कम भयो;
यी लक्षणहरूको सम्भावित टेम्पोरलिटीलाई पनि ध्यानमा राख्दै, उनीहरूको बिरूद्ध लडाई जतिसक्दो चाँडो सुरु गरिनुपर्दछ जसले गर्दा डिप्रेशनको अधिक गम्भीर प्रकारको विकासलाई रोक्न सकियोस्। उनको लागि, कुनै पनि रोग जस्तै, समयमै उपचार आवश्यक छ।
हाम्रो समयमा यो गल्तीले विश्वास गरिन्छ अवसाद हालसालै व्यापक रूपमा व्याप्त भएको एक रोग हो। वास्तवमा पुरातनतामा पनि यसको लक्षणहरू यस्तै वर्णन गरिएको थियो।
त्यसोभए, हिप्पोक्रेट्सले एक पटक तिनीहरूलाई "उदासी" नाम दिए र बिरामीहरूको अवस्था सीधा मौसम र मौसमको अवस्थामा निर्भर गर्दछ र सूर्यको प्रकाशको पर्याप्त मात्रामा उपचार प्रभाव पार्दछ भनेर पत्ता लगायो। आजसम्म, शरद depressionतुमा उदासीनताको सामना गर्ने मुख्य विधि फोटोथेरापी हो।
तपाईको शरीरलाई उदासिनतासँग सामना गर्न मद्दत गर्न तपाईले rules नियमहरू पालना गर्नु पर्छ:
एक स्पष्ट दैनिक तालिका - चाँडै उठेर र ढिलो सुत्ने बिना।
भिटामिन र सेरोटोनिन (चीज, चकलेट, अन्जीर, केरा, अन्य फलफूल र तरकारीहरू) को एक उच्च सामग्रीको साथ खाना।
एक सक्रिय जीवनशैली (हिंडाई, खेल, शारीरिक गतिविधि, आदि)।
पर्याप्त आउटडोर एक्सपोजर।
नियमित आधारमा सकारात्मक भावनाहरू प्राप्त गर्दै।
शरद ब्लूजसँग लड्न, यो सिफारिस गरिन्छ:
दिनको समयमा चिया र कफीको खपत स्थानान्तरण गर्नुहोस्, बिहानको घण्टामा रसको साथ बदल्नुहोस्, र तातो दुध वा कोकाको बेलुका;
तपाइँको बिहानको स्नानको लागि साइट्रस-सुगन्धित उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुहोस्;
एक्लै हुँदा, थियेटर र सिनेमा, परिवारको खाना, साथीहरूलाई भेट्ने र अन्य मनोरन्जनको लागि छनौट गर्न;
कपडा छनौट गर्दा र परिसरको भित्री भागमा उज्यालो रंगलाई प्राथमिकता दिनुहोस्;
नयाँ उपयोगी शौक फेला पार्नुहोस्, उदाहरणका लागि योग।
यो बिर्सनु हुँदैन कि बिल्कुल मौसमी उदासीनताका सबै लक्षणहरूले विभिन्न रोगहरूको उपस्थितिलाई संकेत गर्न सक्छ। तसर्थ, एक विशेषज्ञको सल्लाह लिन आवश्यक छ। विशेष गरी ब्लूजको लामो अवधि र सुधारको अभावको साथ।
तपाईंको शरद र राम्रो मुड!
प्रसवोत्तर डिप्रेसन: लक्षण, संकेत, कारणहरू
कारणहरू र संकेतहरू, डिप्रेसन मापन
शारीरिक उन्मुख उपचार व्यायाम: आतंक आक्रमणको लागि, डिप्रेशनको लागि
61 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 33,278 प्रश्नहरू।